Isongezelelo seCycloastragenol: Izibonelelo, Umthamo, uKhuseleko kunye noPhando
ICycloastragenol (CAG) ekwabizwa ngokuba yi-T-65 yitetracyclic triterpenoid efumaneka kwi I-Astragalus membranaceus isityalo. Kwafunyanwa okokuqala xa I-Astragalus membranaceus isicatshulwa savavanywa ngezithako zayo ezisebenzayo ezinokulwa ukuguga.
I-cycloastragenol inokufumaneka kwi-Astragaloside IV nge-hydrolysis action. I-Astragaloside IV sesona sithako siphambili sisebenzayo kwi I-Astragalus membranaceus imifuno. Nangona i-Cycloastragenol kunye ne-Astragaloside IV zifana nakwimichiza yazo, i-cycloastragenol ilula kubunzima beemolekyuli kune-Astragaloside IV. Ngenxa yoko, i-Cycloastragenol isebenza ngakumbi ngenxa yokufumaneka okuphezulu kokungafaniyo kwaye ngenxa yoko imetabolism ephezulu ye-cycloastragenol. Imetabolism ephezulu ye-cycloastragenol ibonwa kwi-intestinal epithelial ngokusebenzisa ukungahambi kakuhle.
I-astragalus herb isetyenzisiwe njengeyeza lesiTshayina kangangeenkulungwane kwaye iyasetyenziswa nanamhlanje. Isityalo se-Astragalus sisetyenzisiwe ngenxa yeziphumo zaso eziluncedo kubandakanya ne-anti-bacterial, anti-inflammatory kunye nokukwazi ukuphucula ukhuseleko.
I-CAG ibonakalisiwe njengesixhobo sokulwa ukuguga esonyusa umsebenzi we-enzyme telomerase kunye nokuphilisa amanxeba. Okwangoku sisona sixhobo siphambili saziwa ngokunyusa i-telomerase ebantwini, yiyo loo nto ke sisongezelelo sethemba lokuqhubela phambili kophuhliso.
I-cycloastragenol ichongiwe njenge-telomerase activator, edlala indima ekwandiseni ubude beetelomere. IiTelomeres ziikepusi ezikhuselayo ezinophinda-phindo lwe-nucleotide ekupheleni kwe-chromosome. Ezi telomere ziba mfutshane emva kwesahlulo ngasinye seseli esikhokelela kwiselience yeseli kunye nokuthotywa. Ngapha koko, ii-telomeres zinokufinyezwa ngoxinzelelo lwe-oxidative.
Oku kunqunyulwa kwe-telomeres kunxulunyaniswa nokuguga, ukufa kunye nokuphazamiseka okunxulumene ne-ag. Ngethamsanqa, i-telomerase enzyme iyakwazi ukwandisa ubude bee-telomeres.
Nangona kungekho zifundo zibanzi zokuqinisekisa amandla e-cycloastragenol yokwandisa ixesha lokuphila, yinto ethembekileyo yokulwa ukwaluphala. Kufunyenwe ukuba iyazisusa iimpawu zokwaluphala kubandakanya imigca emihle kunye nemibimbi. I-CAG inokunciphisa isoyikiso sokukhula kokuphazamiseka okwandayo njenge-Parkinson, IAlzheimer, kunye neekati.
Ngaphandle kwezininzi Izibonelelo zempilo zecycloastragenol, Kukho iinkxalabo ezinokuthi zikhokelele kumhlaza okanye ekukhawuleziseni umhlaza. Nangona kunjalo, ezinye izifundo eziqhutyelwe kwizifundo zezilwanyana zichaza izibonelelo ze-cycloastragenol ngaphandle kwesifo somhlaza.
I-cycloastragenol powder iyathengiswa ifumaneka ngokulula kwi-Intanethi kwaye inokuthengwa kubaxhasi becycloastragenol abaninzi.
Ngaphandle kwezibonelelo zempilo ezininzi ze-cycloastragenol zibonisiwe, iselilungu elitsha phantsi kwezifundo. Ngaphaya koko, iziphumo ebezingalindelekanga ze-cycloastragenol azicacanga, kungoko kufuneka zisetyenziswe ngononophelo.
I-cycloastragenol sisixhobo se-triterpenoid saponin esivela kwingcambu ye-Astragalus herb. I-Astragalus membranaceus Isityalo besisetyenziselwa amayeza esiNtu amaTshayina (TCM) ngaphezulu kweminyaka engama-2000 kwaye sisasetyenziswa kumalungiselelo ezityalo.
I-astragalus herb yaziwa ngokuba namandla okuphucula amajoni omzimba, ikhusele ubomi, isebenze njenge-diuretic kunye enye impilo iipropathi ezinje nge-anti-hypersensitivity, antibacterial, ukuguga kunye neenzuzo zokulwa noxinzelelo.
ICycloastragenol eyaziwa njenge I-TA-65 kodwa ikwabizwa ngokuba yiCyclogalagenin, iCyclogalegenin, iCyclogalegigenin, kunye neAstramembrangenin. ICycloastragenol zongeza yaziwa kakhulu njenge-arhente yokuguga, nangona kunjalo, ezinye izibonelelo zempilo ze-cycloastragenol zibandakanya ukonyusa amajoni omzimba, iipropathi ezichasene nokuvuvukala kunye ne-anti-oxidative.
ICycloastragenol kunye neAstragaloside IV
Zombini i-cycloastragenol kunye ne-Astragaloside IV zenzeka ngokwendalo kwisicatshulwa se-astragalus. I-Astragaloside IV yeyona nto iphambili esebenzayo kuyo i-astragalus membranaceusNangona kunjalo, yenzeka ngobungakanani bemizuzu engcanjini. Inkqubo yokukhupha ezi saponins, i-cycloastragenol kunye ne-astragaloside IV, ihlala inzima ngenxa yenqanaba eliphezulu lokuhlanjululwa elifunekayo.
Ngoxa babini cycloastragenol kunye ne-astragaloside IV zithathwe kwi-astragalus herb, i-cycloastragenol inokufumaneka kwi-astragaloside IV ngenkqubo ye-hydrolysis.
Ezi zinto zimbini zinesakhiwo semichiza esifanayo, nangona kunjalo, i-cycloastragenol ilula kubunzima beemolekyuli kune-astragaloside IV kwaye ikwafumaneka ngakumbi kwi-bioava.
Indlela yokusebenza kweCycloastragenol
i. Ukusebenza kweTelomerase
Ii-telomeres ziphinda-phinda i-nucleotide kwiziphelo ze-chromosomes ezinemigca kwaye ziboshwe siseti ethile yeeproteni. I-Telomeres ngokwendalo iyancipha ngayo yonke isahlulo seseli. I-Telomerase, i-ribonucleoprotein complex equka i-catalytic reverse transcriptase enzymes (TERT) kunye ne-telomerase RNA (TERC) eyandisa i-telomeres. Kuba eyona ndima iphambili yee-telomeres kukukhusela ii-chromosomes ekudibaneni nasekuthobeni, iiseli zihlala zibona ii-telomeres ezimfutshane kakhulu njenge-DNA eyonakeleyo.
I-cycloastragenol telomerase yeziphumo zokuvula ukwandisa iitelomeres ezibonisa iziphumo eziluncedo.
ii. Kwandisa lipid ukutya
I-Lipids ngokwendalo isebenza njengendawo yokugcina amandla emizimbeni yethu. Nangona kunjalo, uninzi lwezi lipids lunokuba yingozi kwimpilo yethu.
I-cycloastragenol ikhuthaza i-lipid metabolism enempilo ngokusebenzisa i-lipid metabolism biomarkers.
Okokuqala, kwiidosi ezisezantsi, i-CAG inciphisa i-cytoplasmic lipid droplets kwi-3T3-L1 adipocytes. Okwesibini, xa isetyenziswa kwiidosi eziphezulu, i-CAG ithintela umahluko we-3T3-L1 preadipocytes. Okokugqibela, i-CAG inokubangela ukungena kwe-calcium kwi-3T3-L1 preadipocytes.
Kuba i-calcium ephezulu ye-intracellular inokucinezela ukwahluka kwe-adipocytes, i-CAG izisa ibhalansi kwimetabolism ye-lipid ngokukhuthaza i-calcium influx.
Uxinzelelo lwe-oxidative sisizathu esingunobangela wezifo ezininzi kunye neeselience yeseli. Uxinzelelo lwe-oxidative lwenzeka xa kukho ugqithiso lweeradicals zasimahla emzimbeni.
I-cycloastragenol ibonisa iipropathi ezichasene ne-oxidative ngokwandisa amandla e-antioxidant. Lo msebenzi we-antioxidant uhambelana neqela le-hydroxyl elifumaneka kwi-CAG.
Ngapha koko, uxinzelelo lwe-oxidative ngoyena nobangela wokunciphisa i-telomere, yiyo loo nto ukhuseleko lwe-CAG ye-telomere ithathwa kwimisebenzi yokulwa ne-antioxidant kunye nokusebenza kwe-telomerase.
iv. Umsebenzi ochasayo
Ngelixa ukudumba kuyindlela yendalo umzimba olwa ngayo nosulelo okanye ukwenzakala, ukudumba okungapheliyo kuyingozi. Ukudumba okungapheliyo kunxulunyaniswa nokuphazamiseka okuninzi njengepneumonia, isifo seswekile, ukuphazamiseka kwentliziyo kunye nesifo samathambo.
I-cycloastragenol powder ibonisa iipropati ezichasayo. Izibonelelo ezichasene nokuvuvukala kwecycloastragenol ziindlela ezahlukeneyo kubandakanya ukuthintela ukwanda kwe-lymphocyte kunye nokuphucula i-AMP-activated protein kinase (AMPK) phosphorylation.
i.ICycloastragenol kunye namajoni omzimba
I-cycloastragenol inokunceda ukuphucula ukungakhuseleki ngokunyusa ukwanda kwe-T lymphocyte. Amandla e-cycloastragenol supplement ukwenza i-telomerase iyenze ukuba ikhuthaze ukulungiswa kwe-DNA ngelixa kukhokelela ekukhuleni nasekunyukeni kwetelomere.
ii.ICycloastragenol kunye nokuGuga
ICycloastragenol yokuguga iipropathi ngowona mdla uphambili kuphando oluninzi namhlanje. I-CAG ibonakalisiwe ukuba ilibazise ukuguga ebantwini kunye nokunciphisa imiqondiso yokuguga efana nemibimbi kunye nemigca emihle. Umsebenzi we-Cycloastragenol wokulwa ukwaluphala uphunyezwa ngeendlela ezine ezahlukeneyo. Iinkqubo ezichasene nokuguga ze-cycloastragenol zibandakanya;
Ukulwa noxinzelelo lwe-oxidative
Uxinzelelo lwe-oxidative lwenzeka ngokwendalo xa kukho ukungalingani phakathi kwee-radicals zasimahla kunye ne-antioxidant emzimbeni. Ukuba ayilawulwa, uxinzelelo lwe-oxidative lunokukhawulezisa inkqubo yokuguga kwaye lukhokelele kwiimeko ezingapheliyo njengomhlaza, isifo sentliziyo kunye neswekile.
Ukukhutshwa kwecycloastragenol astragalus sisixhobo esincomekayo se-antioxidant kwaye siphucula amandla e-antioxidants esele ikhona. Oku kunceda ukulibazisa ukuguga kunye nokuthintela ukubakho kweengxaki ezinxulumene nobudala.
Njengoko kuxoxwe kwicandelo elingentla malunga nendlela yokusebenza, i-cycloastragenol inceda ukwandisa i-telomeres. Oku kudlala indima ebalulekileyo ekuqinisekiseni ukuqhubeka kwesahlulo seseli ngaloo ndlela kulibazisa ukuguga. Oku kuyanceda ekugcineni amalungu omzimba esebenza ngokufanelekileyo.
I-cycloastragenol inika ukhuseleko kwimitha ye-UV
Xa umntu efumana ukukhanya kwelanga ixesha elide iiseli zomzimba zinokonakala kwaye ngenxa yoko zisilela ukusebenza kakuhle. Oku kuphumela kwifom yokwaluphala ngaphambi kwexesha ekubhekiswa kuyo njengokuguga kweefoto.
I-cycloastragenol powder iza kunceda njengoko kubonisiwe ukukhusela ulusu kwiziphumo eziyingozi zemitha ye-UV.
ICycloastragenol inqanda iprotheni glycation
I-Glycation yinkqubo apho iswekile efana ne-glucose okanye i-fructose incamathele kwi-lipid okanye kwiproteni. I-Glycation yenye yezinto ezinesifo seswekile kwaye inxulunyaniswa nokwaluphala kunye nezinye iingxaki.
Isongezelelo secycloastragenol Inceda ukuthintela ukwaluphala ngenxa ye-glycation ngokuthintela ukwenziwa kweemveliso ze-glycation.
iii.Ezinye iZibonelelo zeMpilo zeCycloastragenol:
Unyango lomhlaza weCycloastragenol
Unyango lwe-cycloastragenol lonyango olunokubakho lubonakaliswa kukukwazi kwakho ukutshabalalisa iiseli ezinomhlaza, ukuphucula amajoni omzimba kunye nokukhusela umntu ekuphenduleni kwi-chemotherapy.
Kuhlolisiso lwabantu abanomdlavuza webele, umhlaza wecycloastragenol Unyango lubonakaliswe ngamandla alo okunciphisa ukusweleka malunga neepesenti ezingama-40.
Ngamana unokukhusela intliziyo kumonakalo
I-cycloastragenol inokubonelela ngokhuseleko ekungasebenzi kakuhle kwentliziyo.
Kuphononongo lweempuku ezinomonakalo wentliziyo, i-cycloastragenol supplementation yafunyanwa ukuphucula ukungasebenzi kwentliziyo ngokukhuthaza i-autophagy kwiiseli ze-myocardial kunye nokucinezela ukubonakaliswa kwe-matrix metalloproteinase-2 (MMP-2) kunye neMMP-9.
Ngokusekwe kuvavanyo lwecycloastragenol, kunokwenzeka phucula umgangatho wokulala. Nangona kunjalo, izifundo zeklinikhi ziya kufuneka ukubonelela ngobungqina obuqinileyo kumandla ayo okuphucula ukulala.
Ngamana unokunceda ukulwa nokudakumba
I-telomere efutshane ifunyenwe kubantu abaneengxaki zokudakumba ezinje ngemicimbi yeemood kunye nezifo ezinje nge-Alzheimer's.
Kuphononongo lweempuku kuvavanyo lokuqubha lokunyanzelwa, isongezelelo secycloastragenol esilawulwa iintsuku ezi-7 kwafunyanwa ukunciphisa ukungahambi. Kwabonakaliswa ukuba kusebenze i-telomerase kwii-neurons nakwiiseli ze-PC1, echaza amandla ayo okulwa nokudakumba.
Ngamana ungakhawulezisa ukuphilisa amanxeba
Ukuphilisa amanxeba ngumba ophambili kwizigulana ezinesifo seswekile. Le nkqubo yokuphilisa amanxeba yenzeka kuthotho lwemisebenzi. Le misebenzi yile; umsebenzi wokukrala, ukujiya, ukubuyisela i-epithelium, ukwakha kwakhona kunye nokugqitywa kokumiliselwa kweeseli zeziqu. Ezi seli ze-epithelial stem zibaluleke kakhulu kunyango lwesifo seswekile.
Kuyaboniswa ukuba ukonakala kwe-telomere kuchaphazela kakubi ukuphilisa amanxeba. Kulapho i-cycloastragenol powder ingena khona ukulungisa i-telomere efutshane kunye nokwenza ngcono ukwanda kunye nokuhamba kweeseli zeziqu. Oku kunceda ekulungiseni amanxeba ngokukhawuleza.
Ukuphucula impilo yeenwele
Ukujongwa kwakhona kweCycloastragenol ngabasebenzisi babonisa ukuba i-cycloastragenol inokunceda ekuthinteleni ukulahleka kweenwele, ukukhuthaza ukukhula kweenwele kunye nokwenza ngcono umbala weenwele.
Uninzi lwecycloastragenol astragalus luthathe izibonelelo zezi;
Inika umsebenzi olwa nentsholongwane ngokuchasene neeseli zomzimba ze-CD4 +.
Iphucula impilo yolusu.
Umthamo oMiselweyo weCycloastragenol
Umgangatho cycloastragenol balawule imalunga ne-10 mg yonke imihla. Nangona kunjalo, kuba oku kuyinto entsha zongeza idosi yayo iya kuxhomekeka ikakhulu kusetyenziso, ubudala kunye neemeko zonyango ezingaphantsi.
Lo mgangatho we-cycloastragenol dosage kufuneka unyuswe kubantu abadala abangaphezulu kweminyaka engama-60 ukufezekisa i-telomere elongation eyaneleyo kunye nokucothisa inkqubo yokuguga.
Ngaba iCcyloastragenol ikhuselekile?
I-cycloastragenol powder ngokubanzi ithathwa njengekhuselekileyo kumanqanaba athile emilinganiselo. Nangona kunjalo, kuba intsha zongeza iziphumo ebezingalindelekanga zecycloastragenol azikaziwa.
Ukuphononongwa okumbalwa kwe-cycloastragenol kwizibonelelo ezichaziweyo ze-cycloastragenol azigqibekanga ngokwaneleyo ukuba zikuqinisekise ukusetyenziswa kwazo.
Ukongeza, kukho inkxalabo yokuba i-cycloastragenol supplement inokukhawulezisa umhlaza ngokukhuthaza ukukhula kwamathumba. Olu luqikelelo lwethiyori olusekwe kwinto yokuba imo yokusebenza kwe-cycloastragenol iphambili kukuqina kwe-telomere. Yiyo loo nto kucingelwa ukuba iya kuphucula ukukhula kwesifo somhlaza.
Kuyacetyiswa ke ukuba uphephe ukunika i-cycloastragenol kwizigulana ezinomhlaza de kufumaneke idatha ethembekileyo ngokubhekisele kolu qikelelo kunye nokuthintela nayiphi na ityhefu yecycloastragenol engaziwayo.
Singayifumana phi eyona cycloastragenol ilungileyo?
Ewe, cycloastragenol powder iyathengiswa ifumaneka ngokulula kwi-intanethi nakwiivenkile ezahlukeneyo ezinesondlo. Nangona kunjalo, uhlala usenza uphando ngecycloastragenol powder ethengiswayo evela kubathengisi becycloastragenol evunyiweyo kunye nedumileyo ukuqinisekisa ukuba ufumana i-cycloastragenol ecociweyo.
I-cycloastragenol powder ibonakalisiwe ineziphumo ezininzi eziluncedo ngakumbi kwiipropathi zokulwa ukuguga ze-cycloastragenol. I-cycloastragenol telomerase activation yeyona ndlela iphambili yokusebenza ethi inyuse i-telomere. Oku kubonisiwe kwiimodeli ezininzi zezilwanyana kunye nakambalwa i-In vitro zifundo.
Uvavanyo lweklinikhi lwe-cycloastragenol astragalus yokukhupha isiphumo ekwandiseni i-telomere zimbalwa kakhulu kwaye ke izifundo ezizezinye ukunika ubungqina obuqinileyo ziyafuneka.
Iziphumo ezinokubakho ze-TA-65 ekuphuculeni ukungasebenzi kakuhle kwentliziyo ayinzulu kakhulu njengoko izifundo ezinqongopheleyo zikho ukuxhasa le ntshukumo ye-TA-65.
Ukufunda imetabolism ye-cycloastragenol kwiinkcukacha kuya kuphucula kwakhona idatha ekhoyo kunye nokuveza nayiphi na ityhefu ye-cycloastragenol enokuthi yenzeke ngenxa yokuqokelelana okugqithileyo.
Izifundo ezongezelelweyo zokuvavanya ukusebenza kakuhle kwe-cycloastragenol supplement kwizibonelelo ezichaziweyo. Iziphumo ebezingalindelekanga ze-cycloastragenol azikaziwa. Ke ngoko, uphando kufuneka lujolise ekumiseleni okunokwenzeka iziphumo ebezingalindelekanga ze-cycloastragenol kunye nokusebenzisana namanye amayeza.
Ekuqondeni izibonelelo zempilo ze-cycloastragenol, iyakunceda ukuphonononga iindlela ezisisiseko sezi zenzo zeCAG.
Ukongeza, idosi efanelekileyo yecycloastragenol ifuna izifundo ezingaphezulu ukuvavanya idosi ecetyiswayo yamaqela ahlukeneyo. Abathengisi abahlukeneyo becycloastragenol babeke iidosi ezahlukeneyo ekufuneka zilungelelaniswe nophando.
U-Yuan Yao kunye noMaria Luz Fernandez (2017). "Iziphumo eziNcedisayo zeTelomerase Activator (TA-65) ngokuchasene nezifo ezingapheliyo". Isondlo se-EC 6.5: 176-183.
UWang, J., Wu, M.-L., Cao, S.-P., uCai, H., Zhao, Z.-M., kunye neNgoma, Y.-H. (2018). I-cycloastragenol ivuselela ukonakaliswa kwentliziyo kuvavanyo ngokukhuthaza i-myocardial autophagy ngokuthintela ukusayina kwe-AKT1-RPS6KB1. I-Biomedicine kunye nePharmacotherapy, 107, 1074-1081. ikhonkco: 10.1016 / j.biopha.2018.08.016
Ilanga, C., Jiang, M., Zhang, L., Yang, J., Zhang, G., Du, B.,… Yao, J. (2017). I-cycloastragenol ilamla kusebenze kunye nokwanda koxinzelelo kwi-concanavalin ye-A-indosed mouse lymphocyte pan-activation model. I-Immunopharmacology kunye ne-Immunotoxicology, 39 (3), 131-139. ikhonkco: 10.1080 / 08923973.2017.1300170.
Ip F, C, F, Ng Y, P, An H, J, Dai Y, Pang H, H, Hu Y, Q, Chin A, C, Harley C, B, Wong Y, H, Ip N, Y: I-cycloastragenol yiToweromerase Activator enamandla kwiiseli zeNeuronal: Iziphumo kuLawulo loxinzelelo. Iimpawu ze-Neurosignals 2014; 22: 52-63. ikhonkco: 10.1159 / 000365290.
Yu, Yongjie & Zhou, Limin & Yang, Yajun & Liu, Yuyu. (2018). ICycloastragenol: Umgqatswa wenoveli onomdla kwizifo ezinxulumene nobudala (Ukuphononongwa). Uvavanyo kunye noNyango lweNyango. Ngomhla we-16 / etm.10.3892.
UMNYANGO WE-CYCLOASTRAGENOL (78574-94-4)
3. Indlela yokusebenza kweCycloastragenol
4. Izibonelelo zeCycloastragenol
5. Umthamo osemgangathweni weCycloastragenol
6. Ngaba iCycloastragenol ikhuselekile?
7. Singayifumana phi eyona cycloastragenol ilungileyo?
8. Olunye uphando